I-Chopbox yibhodi yokusika ehlakaniphile ye-5in1, ngaba uya kusinceda? [Uhlalutyo] | Iindaba zegajethi
Itekhnoloji ihamba nathi ngakumbi nangakumbi kwiindawo ezininzi zemihla ngemihla, nangona kunjalo, ukukhula kwayo kunye nokusetyenziswa okutsha kusenza sibone ukuba ikhona nakwezo ndawo apho sasingenakuze sicinge ngayo, kwaye yile nto isizisa apha namhlanje.
I-Chopbox yibhodi yokusika ehlakaniphile enemisebenzi emihlanu obungazi ukuba uyayidinga. Ngaphandle kwamathandabuzo, siyifumene iyimveliso enomdla kakhulu kwaye asikwazanga ukukuphepha ukuyihlalutya. Ukuba ufuna ukuthatha inyathelo elingaphaya kwesiqhelo ekhitshini lakho, awunakuphoswa kuhlalutyo esilwenzileyo kwi-Chopbox esiyizisa namhlanje, ngaba uhlakaniphile okanye u-foodie?
1 Izixhobo kunye noyilo: I-Ecology kunye nokungangeni kwamanzi
2 Izitya ezintlanu kwenye
3 Izimvo zoMhleli
Izixhobo kunye noyilo: I-Ecology kunye nokungangeni kwamanzi
Ngokwenene, le Chopbox inokujongeka njengayo nayiphi na ibhodi yokusika i-bamboo, njengaleyo onokuyithenga kwi-IKEA okanye nayiphi na enye indawo yokuthengisa. Sifumana imveliso enobungakanani be-454.6 x 279.4 x 30.5 mm enkulu kakhulu, njengoko unokucinga, kunjalo iya kwenza ibhodi yokusika esebenza ngeendlela ezininzi. Ubunzima bubonke yi-2,7 Kilogram, yenziwe ngokupheleleyo ikhulu ekhulwini organic bamboo. Ezi bhodi ze-bamboo, eziyinto ebendiyisebenzisa kwimihla ngemihla, ziyi-ecological kwaye zifuna ukulungiswa okuncinci, njengoko zingafunxi amanzi okanye zichaphazele ukufuma.
Inencinci imiphetho emiphethweni esinceda siqokelele "ijusi" Kula mifuno okanye iziqhamo esizisikayo, ewe, uphawu luqinisekisa ukuba umphezulu webhodi yokusika kunye nezitshixo zokulola zinokutshintshwa xa zinokuwohloka kakhulu ngokusetyenziswa.
Nangona kukho izinto ze-elektroniki, Itafile inesiqinisekiso se-IPX7 ngokuchasene namanzi, Ngoko ayinamanzi ngokupheleleyo, ewe, basikhumbuza ukuba asiyi kukwazi ukucwiliswa okanye ukuyibeka kwi-dishwasher, into engakhuthazwayo kunye naluphi na uhlobo lwetafile ye-bamboo, nokuba "ihlakaniphile".
Kwelinye icala, itheyibhile iyakwazi ukwahlulwa ibe ziindawo ezimbini, enye yegeneric, kunye netafile ebekwe kwindawo esezantsi esinokuyisusa, ngale ndlela siyakuyinqumla inyama kunye nentlanzi ngokwahlukeneyo, ngaloo ndlela siphepha okuninzi. ungcoliseko lokutya. Ndiyifumene le ngcamango enkulu yokubandakanya itafile eyongezelelweyo eya kukhonza ukusika, ukuqokelela inkunkuma okanye nantoni na esiyifunayo.
Izitya ezintlanu kwenye
Sele siwuxoxile umsebenzi wendabuko "wokunqunqa" ngokunxulumene nomsebenzi we I-Chopbox, Kodwa yintoni enokusenza sichithe malunga nekhulu leeuro kwimveliso efana nale kukuba inomnye umsebenzi owongezelelweyo. Makhe sithethe ngezinye zazo:
Isibane seUV sokubulala iintsholongwane: Ukubeka itafile esezantsi kule ingentla sinokuvula ukukhanya kwe-nanometer ye-Ultraviolet eyi-254 ekwaziyo ukubulala i-99% yeentsholongwane kunye neebhaktiriya. Oku kuya kusinceda sobabini ukuba sibulale iintsholongwane kwiitafile ngokwazo, kunye nokufaka iimela okanye izixhobo ngomngxuma osecaleni. Ukukhanya kuyasebenza kwaye kuvaliwe ngokuzenzekelayo kwaye ngomzuzu nje omnye siya kube silwenzile ukubulawa kweentsholongwane ngokufanelekileyo.
Isikali esakhiweyo: Omnye umsebenzi osisiseko, njengoko sisika kwaye sisenza iiresiphi zethu eziphambili, into esingenakuyiphosa sisikali kanye. Kule meko, kuphela ngokuhambisa izinto ukuya ekhohlo sinokulinganisela ngokuzenzekelayo ukutya kunye nobuninzi beekhilogram ezi-3. Unokukhetha iyunithi yokulinganisa kwiphaneli yayo yokulawula kunye nomsebenzi we "tare" ukwenzela ukuba ubunzima be isikhongozeli asithathelwa ngqalelo.
Isibali-xesha sedijithali: Ngaphantsi kobunzima, kwiphaneli yokulawula, sinomsebenzi ochazwe ngewotshi ethatha ithuba lephaneli ye-LED ukusinika amaxesha exesha elingaphezu kweeyure ezili-9 enkosi kwisibali-xesha sayo sedijithali esiphendula ngokulula ukuyibamba.
Isiloli semela ephindiweyo: Okokugqibela, ekubeni siza kusika, eyona nto ilungileyo kukuba iimela zihlaziywe, kwaye ngenxa yoko ineentsimbi ezimbini zokulola iimela, enye yenziwe ngeceramic kwaye enye yenziwe ngelitye ledayimani ukuze siyisebenzise kuzo zonke iintlobo zeemela. .
Le theyibhile I-Chopbox isebenzisa ibhetri ye-3.000 mAh ehlawuliswa ngentambo yayo ye-microUSB. Andazi ncam ukuba kutheni bebheje ngaye microUSB Ukwazi ukuba i-USB-C ngumgangatho wangoku. Ngokwenxalenye yayo, le bhetri iyasiqinisekisa ukuya kuthi ga kwiintsuku ze-30 zokusetyenziswa, asikwazanga ukuyigqiba kwiimvavanyo zethu, ngoko asikwazanga ukujonga ixesha lokutshaja, esiqikelela ukuba liya kuba malunga neyure enesiqingatha. .
Yibhodi yokusika ekrelekrele, ewe, okanye eyona bhodi yokusika itekhnoloji onokuyicinga, kwaye ngenxa yesi sizathu inexabiso elisondele kwi-€ 100. (€ 99,00 nge Iplanetonline). Kucacile ukuba imisebenzi yayo inomdla kwaye inokwenza ubomi bethu bube lula, kodwa le yimveliso ye-caprice enexabiso eliphambili elongezelelweyo kukuba ukuba singabathandi be-minimalism, sigcina izixhobo ezine ekhitshini, into ethi ngamaxesha ukuba bayabaleka, kuyaxatyiswa.
Gcina indawo kunye nezixhobo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Chopbox yibhodi yokusika eyi-5in1, ngaba ungasinceda? [Uhlalutyo]
Ukubheja kweJabra kwi-Evolve2 75 yendalo esingqongileyo